Dowladda Soomaaliya oo lagu dacweeyay QM Iyo Midowga Africa. – Idil News
Dowladda Soomaaliya oo lagu dacweeyay QM Iyo Midowga Africa.
NAIROBI (IDIL NEWS)-Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya ayaa dareenkeeda ku aadan muranka Badda eek ala dhexeeya Soomaaliya waxaa ay u gudbisay Qaramadda midoobay iyo Golaha Amniga eeMidowga Africa, sida ay baahisay Warbaahinta Capital FM.
Xog-hayaha Arrimaha Dibadda Kenya Monica Juma ayaa u sheegtay Warbahinta Capital FM in wasaaradedu ay wargalisay Safiiradda Dalalka xubinta ka ah Goleyaasha Amniga ee Qaramadda midoobay iyo Midowga Africa si ay arrinta wax badan uga ogaadaan.
“Waxaan Warbixin ka siinay Xaaladda inoo dhexeysa Annaga iyo Soomaaliya, xaqiiqda ayaan siinay Labadda Goleba si ay usoo saaraan dereenkooda arrintaan”ayey tiri.
Waxaa jiraty kulan ay Wasiirku Jimcihii lasoo dhaafay la yeelatay Safiiradda Dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska ujooga Kenya ee Nic Hailey iyo Aline Kuster.
Monica Juma ayaa sheegtay Arbacadii in Wasaaradedu ay markasta u furantahay wada-hadal si xalka ugu haboon looga gaaro muranka Badda ee udhexeeya dalalka Dariska islamarkaan loo soo celiyo Dublamaasiyadda hakatay.
Kenya ayaa si ay umuujiso caradeeda waxay u wacatay Safiirkii u joogay Muqdisho 16kii Bishaan iyadoo Safiirkii Soomaaliya ee Nairobi-na ku amartay in uu wadankiisa dib ugu soo laabto.
Dowladda Soomaaliya ayaa Maxkadda caalamiga ah ee Cadaaladda waxaa ay horgeeysay dacwad ka dhan ah Kenya oo kusoo xad-gudbtay Badda Soomaaliya islamarkaana sheegay in ay leedahay dhul uu khayraadku jiifo.
Wasiirka Arrimaha Dibadda e Kenya ayaa sidoo kale sheegtay in Dowladeedu ay jawaab Wanaagsan ka heshay Dalal dhowr ah, taasi oo ku aadan muranka Soomaaliya ka dhexeeya. Hase ahaate ma aysan sheein dalalka ay yihiin.
“Fariinta aanu dalalka caalamka ka helnay waxaa ay dhiiri galineeysa in arrinta si saxiibtinimo loo xaliyo waana sida aan dooneeyno” ayey ku hadalkeeda Ambassador Jumma.
Muranka Labadda Dowladood oo aan wali wax xal ah laga gaarin ayaa Soomaaliya dhankeeda waxaa ay ka dheeraaneeysaa in Badeeda ay wadahadal ka gasho. Waxay na Dowladda Soomaaliyeed sheegtay in ay ka war sugi doonto Go’aanta Maxkamadda caalamiga ah.